iOS 8.0 ကိုတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ချရန် အိုင်ဖုန်းသတင်း
iOS 8.0 ကိုတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်လင့်များ
iOS 8 ကိုရပြီ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်နှင့် iTunes မှတဆင့်သို့မဟုတ် OTA မှတဆင့်အလိုအလျောက်မွမ်းမံနိုင်ခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာအတွက် firmware ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးအခွင့်အလမ်းရသောအခါမွမ်းမံမှုကိုပိုမိုတည်ငြိမ်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
သင်ဤနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်သောဖြစ်ရပ်တွင် iOS 8 ကိုတိုက်ရိုက် download link မှတဆင့်လက်ဖြင့် download လုပ်ပါ, iTunes ကိုသွားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကီးဘုတ်ပေါ်တွင်သော့ကိုနှိပ်ပါ။ Windows သို့မဟုတ် Mac ကိုသုံးသည်ဖြစ်စေ၊ တစ်ခုပေါ်တွင်တစ်ခုဖြစ်စေ၊ Windows ကိစ္စများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Restore ခလုတ်ကိုမနှိပ်မှီ Shift (Shift) ကိုကိုင်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး Mac ကိုအသုံးပြုပါကထိုခလုတ်သည် Alt key ဖြစ်သည်။
အရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်ခွာသွားမယ့်ပြတင်းပေါက်အသစ်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ် လမ်းကြောင်းရွေးပါ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ် download လုပ်ထားသော iOS 8 ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကသာ select လုပ်ပါပြီးဖြစ်စဉ်ကိုအပြီးသတ်ကြကုန်အံ့။
အခုငါတို့သာရှိသည် iOS 8 ကို၎င်း၏တိုက်ရိုက် download link မှတဆင့် download လုပ်ပါApple အတွက်မိုဘိုင်း operating system သစ်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောထုတ်ကုန်အားလုံး၏စာရင်းဖြစ်သည်။
iPad Air (၅ ကြိမ်မြောက် WiFi + ဆယ်လူလာ)
iPad Air (၅ မျိုးဆက်ဝိုင်ဖိုင်)
iPad (၄ မျိုးဆက် CDMA)
iPad (၄ မျိုးဆက် GSM)
iPad (၄ မျိုးဆက်ဝိုင်ဖိုင်)
iPad mini (ဝိုင်ဖိုင်)
iPad mini2(ဝိုင်ဖိုင် + ဆယ်လူလာ)
iPad Mini2(ဝိုင်ဖိုင်)
iPad3ဝိုင်ဖိုင် (၃ မျိုးဆက်)
iPad3Wi-Fi + ဆယ်လူလာ (ATT အတွက်မော်ဒယ်)
iPad3Wi-Fi + ဆယ်လူလာ (Verizon အတွက်မော်ဒယ်)
အိုင်ပက်2ကို Wi-Fi ကို (Rev A) ကို
အိုင်ပက်2ကို Wi-Fi ကို
အိုင်ပက်2ကို Wi-Fi + 3G (ဂျီအက်စ်အမ်)
အိုင်ပက်2ကို Wi-Fi + 3G (CDMA)
iPhone5(ဂျီအက်စ်အမ်)
iPhone 5c (ဂျီအက်စ်အမ်)
iPhone 5s (ဂျီအက်စ်အမ်)
iPhone ကို 6
iPhone ကို6Plus အား
iPhone ကို 4s
iPod touch (5th မျိုးဆက်)
link - iOS 8 ကို install လုပ်ရန်သင်ခန်းစာ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 8 » iOS 8.0 ကိုတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်လင့်များ
Ariel saun ဟုသူကပြောသည်
အချက်အလက်များအားလုံးအတွက်အမှန်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အမှန်တကယ်အားဖြင့် IOS8 ကိုစမ်းသပ်ရန်ကျွန်ုပ်သည် Itunes မှတစ်ဆင့်ပြproblemsနာမရှိဘဲ update လုပ်နိုင်သည်။
Ariel Saun သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်လွန်ခဲ့သော ၃ ရက်ကဗားရှင်း ၈ သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းပျက်စီးသွားပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏လက်ဗွေကိုမဖတ်ပါ၊ ခေါ်ဆိုမှုများကအံဝင်ဂွင်ကျမရှိခြင်း၊ အချက်ပြမှုကျဆင်းသွားခြင်း၊ ယခင်ဗားရှင်း
leonardo mendez အားစာပြန်ပါ
လွန်ခဲ့သော ၃ ရက်က ios 8 ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ခဲ့ပါပြီ၊ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ် install လုပ်သော gm သည်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမလဲ။ ကျွန်ုပ်ဤကဲ့သို့သောနေရန် (သို့) ios3public ကို install လုပ်ခြင်းလား။
pangu သည် ios 8 နှင့်သဟဇာတဖြစ်မှုရှိပါသလား။
David သင်ကြီးပြင်းလာပြီ !!! Iphone4သည် IOS 8 ကိုအသုံးမပြုကြောင်းနားလည်ပါသည် !!!!!
ကြည့်ပါ ဦး ။ ios 8 ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်၍ မရပါ။ သို့သော်၎င်းကိုသင် install လုပ်ထားပါကသင်၏ device ၏ backup ကိုမတပ်ဆင်ပါနှင့်။ မင်းသာအလုပ်လုပ်ရင်မင်းမျှဝေမယ်ဆိုရင်ငါသဘောကျတယ်။
ငါ a1457 အတွက်ဘယ်တစ်ခုသုံးပါ? ငါ့မှာရွှေရှိတယ်၊ ငါရှာမရဘူး၊ ဘယ်တပ်ရမလဲမသိဘူး
ကျွန်ုပ်၏ iPhone5(CDMA) iPhone5(GSM) ဟုတ်မဟုတ်မည်သို့သိနိုင်သနည်း။
CDMA ငါသိတယ်၊ အဲဒါကချစ်ပ်ကိုမသုံးဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်အဲဒီမှာခေါ်တဲ့အရာနဲ့ဂျီအက်စ်အမ်ဆိုတာချစ်ပ်ကိုသုံးတဲ့သူပဲ။
သင်၏စက်ပစ္စည်းသည် sim card (gsm) သို့မဟုတ်မသုံးပါက (cdma) လွယ်ကူသည်။
David! သင်၏ iPhone 8 တွင် iOS4ကိုတပ်ဆင်။ မရပါ။ အပြင်းအထန်မတောင်းဆိုပါနှင့်
ကောင်းပြီ၊ မွမ်းမံလို့မရဘူး၊ ဆက်သွယ်မှုကိုမတည်ဆောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။
သူတို့ကိုချန်ထားပါ၊ ios 8 နှင့်၎င်းကိုထောက်ပံ့သောပစ္စည်းများ၏လိုက်ဖက်ညီမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်မရရှိနိုင်ပါ။ အကယ်၍ သင်အုတ်တစ်ခုလိုချင်ပါကကောင်းပါသည်။ ဆော့ဝဲလ်နဲ့ drive ကိုမွမ်းမံရုံနဲ့ဘာကြောင့်မင်းဘဝကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်ရှုပ်ထွေးစေတာလဲမသိဘူး။ တစ်စုံတစ် ဦး ကဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ပေးလျှင်၎င်းသည် Apple ဖြစ်သည်
ငါ GM version ရှိတယ်၊ ငါ update လုပ်ရမလား။
Nacho Casas ဟုသူကပြောသည်
ငါ GM ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်နှင့်နောက်ဆုံးအတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုမြင်သည်အတိုင်း ... ဒါကြောင့်မွမ်းမံရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ... ဘယ်လိုထင်သလဲ
Nacho Casas အားစာပြန်ပါ
JB ဟာ IOS 8 နဲ့သဟဇာတဖြစ်လားသိလား။
Paul galli ဟုသူကပြောသည်
Link နှင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ၊ သို့သော်မွမ်းမံသည့်အချိန်တွင်ဖိုင်ကိုထုတ်ယူရန် ၁ နာရီခန့်ကြာပြီး bar ၏ ၂၀% သာရှိသည်။ ဖိုင်ကို download လုပ်ရန်မိနစ် ၂၀ သာကြာသည်။ ??
Paul Galli အားစာပြန်ပါ
မင်းမှာ iPhone, GSM, CDMA ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာသိဖို့ပါ။
ဆွဲယူအသိပေးချက်များသည်၎င်းတို့ကိုဖယ်ရှားရန်သင့်အတွက်အလုပ်လုပ်သလား။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည် ၇/၁၀ ကြိမ်ကြိုးစားပြီးသတိပေးချက်ကိုကျွန်ုပ်မနှိပ်မချင်းဖမ်းမိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဖုန်းမော်ဒယ်နှင့် ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်လျှင်အမှားဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖယ်ရှားပေးသည့် OTA မှတစ်ဆင့် update တစ်ခုလည်းရှိသည်။ ကျွန်တော့်အဖြစ်အပျက်မှာသက်ဆိုင်ရာဖိုင် (5S GSM) ကိုကူးယူပြီးဒီဖိုင်ကို အသုံးပြု၍ iTunes မှတစ်ဆင့်မွမ်းမံရန်ကြိုးစားသောအခါ၊ ၎င်းသည် firmware လိုက်ဖက်တဲ့ပြproblemsနာတွေဖြစ်စေတယ်။ ယခုငါ OTA ကိုကြိုးစားနေသည်၊
David ငါနောက်ဆုံးမှာမင်းရဲ့ iphone 8 မှာ iOS4ကို install လုပ်လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် pangu ကိုသုံးလို့ရမလားဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတာဟုတ်ပြီလား။
Pascual Vila ဟုသူကပြောသည်
ငါထင်တာကတော့ 5s ရဲ့ firmware ကိုဒေါင်းလုပ်ချခြင်းမှာအမှားတစ်ခုလို့ငါထင်တယ်။ CDMA မှ GSM နှင့်အခြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများလည်းရှိသည်။ ငါ 5s A1457 အတွက်ဂျီအက်စ်အမ်ကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးပြီ။ အဲဒါကငါ့ကို firmware အမှားလုပ်ပေးတယ်။ အခြားတစ်ခု Download လုပ်ပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Pascual Vila အားပြန်ပြောပါ
iphone5တွင် download လုပ်ခြင်းသည်အမှားတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့နှစ်ခုစလုံးသည် 12a အတူတူဖြစ်သည်
ကိုယ့် ipad2ကို install လုပ်ရုံပဲ ios 9.5 ကို install လုပ်လို့မရပါဘူး
မင်္ဂလာပါ၊ ကျေးဇူးပြုပြီး iphone ကို update လုပ်ရန် link ကိုကျွန်ုပ်အားကူညီပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Apple က iOS 8 အတွက်သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
iOS 8 နောက်ဆုံးဗားရှင်း link ကို download လုပ်ပါ